IVevoCart: Ipulatifomu ye-Ecommerce efakiwe ephelele | Martech Zone
IVevoCart: Ipulatifomu ye-Ecommerce efakiwe ephelele
Yakha ibhizinisi lakho eliku-inthanethi ngeplatifomu yeVevoCart bese uthola isitolo esigcwele se-e-Commerce esilungiseka kahle kakhulu, esikahle futhi esingenziwa ngezifiso ngokuphelele ngekhodi yomthombo ephelele ye-ASP.NET C # ifakiwe. Ungakwazi kalula faka i-VevoCart usebenzisa isifaki se-Microsoft Web Platform or ulanda ngqo.
Idizayini Esabelayo / Ukulungela Kwamaselula - IVevoCart iza nedizayini ephendulayo, idizayini efanelekile kuyo yonke idivayisi noma ngabe ideskithophu, ilaptop, ithebhulethi noma iselula. NgeVevoCart, awusadingeki ukhathazeke ngokuklama amadivayisi ahambisanayo ahlukile.
Kuqinisekiswe i-PA-DSS - IVevoCart uhlelo lokusebenza lwe-eCommerce oluhambisana ne-ASP.NET PA-DSS. IVevoCart icubungula ukukhokha ngeVevoPay ehlolwe ngokuphelele ngumhloli ofanelekayo futhi isicelo sokukhokha esiqinisekisiwe se-PA-DSS.
Ukusekelwa Kwamasitolo Amaningi - I-VevoCart Multi-Store version ivumela abathengisi ukuthi basebenzise izitolo eziningi ezinamagama wesizinda ahlukene babelana nge-database eyodwa kanye nokucubungula okuphakathi kokukhokha.
Ithuluzi Lokumaketha Elicebile - Amathuluzi wokumaketha weVevoCart enzelwe ukuthi aguquguquke futhi asabeke kalula ukuxhasa izinhlobo eziningi zemikhankaso yokukhangisa. Lawa mathuluzi azovumela inkampani yakho ukuthi ihehe amakhasimende amaningi, yakhe ukwethembeka kwabo, isungule ukwethembana nokwaziwa komkhiqizo.
Qedela Izici ze-eCommerce - Ungangeza imikhakha nemikhiqizo engenamkhawulo. Kunezimpawu ezithile zomkhiqizo ongazisetha. IVevoCart futhi isekela izitolo eziningi nezici zezilimi eziningi. IVevoCart ihlangana nezinkampani eziningana zokuthumela nokukhokha online. Ezinye izici zifaka amathuluzi wokumaketha, imibiko yokuhlaziya, ukulungiselelwa kokubonisa, amakhasi wokuqukethwe, nokuningi.
Umklamo Wezitolo Zokuqala - IVevoCart iza nemidwebo yamathempulethi yesimanje ezokwenza iwebhusayithi yakho ibukeke isemthethweni futhi ithembekile, ezosiza ukuvula izivakashi zakho zibe amakhasimende akho.
Iphaneli Yokuqondisa Enamandla - Iphaneli yokulawula yeVevoCart ikunika ukulawula okugcwele kuwebhusayithi yakho. Iphaneli likuvumela ukuphatha kalula izitolo zakho, imikhiqizo, ama-oda, amakhasimende, izindlela zokuthumela nezokukhokha.
Isitolo se-Facebook Commerce Facebook yisici esivumela abathengisi ukuthi bangeze isitolo ekhasini le-Facebook fan. Amakhasimende abhalisela ekhasini le-fan angathenga yonke imikhiqizo njengokuhlala kuwebhusayithi yesitolo.
Ukushicilela kwe-eBay I-eBay ingenye yezimakethe ezinkulu kakhulu zokuthengisa imikhiqizo nezinsizakalo zakho. Ukufakwa kuhlu kwemikhiqizo yakho ku-eBay akunakunakwa! IVevoCart ikunikeza ithuluzi lokufaka kuhlu lwe-eBay, lokhu kuzosiza ngempumelelo ukukhulisa ukuthengisa kwakho.
I-SEO ne-SMO Kuhle - I-VevoCart inikeza isici se-URL sokwenza imisebenzi ye-canonicalization ekhombisa i-URL yakho oyithandayo kuzinjini zokusesha. Ngohlobo lwe-Multi-Store, abathengisi bangasetha i- “Preferred Store” ukukhombisa ukuthi amakhasi womkhiqizo nezigaba adluliselwe ekhasini le-canonical lesitolo esikhethiwe.
Ikhodi yomthombo - I-VevoCart ifakiwe ifaka ikhodi yomthombo ye-ASP.NET isebenzisa i-database ye-MS SQL 2005 backend. Lokhu kukuvumela ukuthi ushintshe ikhodi yomthombo futhi unwebise ukusebenza kwayo kalula.
Imali yelayisense yesikhathi esisodwa - Ayikho Imali ekhokhwayo yelayisense yesikhathi esisodwa evumela ukuthi usebenzise umkhiqizo wakho weVevoCart inqobo nje uma ufuna. Azikho izinkokhelo zanyanga zonke. Ayikho imali yokwenziwayo.
Tags: asp.netc#csharpezokuhweba ngekhompyuthaplatform ecommerceinqola yokuthenga ye-microsoftInqola yokuthengai-vevocart